Esory ny masirasira ela – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 avril 2, 2013 mai 31, 2013 Laisser un commentaire sur Esory ny masirasira ela
Esory ny masirasira ela, mba ho vongana vaovao hianareo, araka izay
tsy maha-misy masirasira anareo. Fa voavono Kristy, Paska ho antsika. I Kor 5: 7
Amin’ny fomba fanaovana mofo raha tiana hitombo sy hahazo tsirony araka izay tiana dia asiana masirasira, na koa lalivay araka izay iantsoana azy, ny koba ampiasaina. Rehefa asiana ny lalivay sy rano mafana ny koba ka alona mandritra ny fotoana maharitraritra, dia mitombo izany koba izany. Raha maharitra ela loatra ny lalivay dia marikivy ny koba.
Ny masirasira ela ambara eto amin’ity teny eto ity dia toa hanambarana
faharatsiana eo amin’ny koba rehefa nahazo ny masirasira ela, izay nahazo ny koba manontolo, fa tsy ny ampahany kely ihany. Ny ambaran’i Paoly eto, dia mamerina ny fomba fihinanana ny Paska, izay nampiasana mofo tsy misy masirasira , mariky ny fahadiovana, ary izany indrindra no ambarany eto hoe: mba ho vongana vaovao hianareo, araka izay tsy maha-misy masirasira
anareo. Mafy loatra ny nanjo ny zanak’Isiraely tamin’ ny nanadevozan’ny Egyptiana azy ka nila fanavotana sy fanovana teo amin’ny fiainany izy ireo. Eo amin’ny maha Kristiana dia ny fanandevozan’ny fahotana no mangeja ny olona ka mamatotra azy tsy ho olona afaka.
Ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema no niaro ny zanak’Isiraely tamin’ny fahafatesana, fa ny fahafatesan’i Kristy kosa no nanavotana antsika tamin’ny
fahafatesantsika noho ny otantsika. Fa voavono Kristy Paska ho antsika.
Ny lolompo sy ny faharatsiana dia manimba ny olombelona ka azo oharina amin’ny masirasira manenika ny koba manontolo, ary izany lolompo izany sy
ny faharatsiana dia manenika ny fianan’ny olona manontolo. Asain’i Paoly esorina izany ka mba ho tonga vongana vaovao ny olona. Rehefa miala ny lolompo sy ny faharatsiana dia ho soloina fahadiovam-po sy fahamarinana izany. Ny nasain’Andiamanitra nataon’ny zanak’ Isiraely tamin’izy hiomana handeha hiala ny tany Egypta dia ny fihinanana ny anana mangidy, ho mariky ny ngidin’ny fijaliana tamin’ny nanadevozan’ny Egyptiana ny zanak’Isiraely, ary ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira mba ho mariky ny fahadiovana na
ny fialan’ny faharatsiana.
Mety tsy mba tsaroantsika ny namonjena sy ny nanadiovana antsika
tamin’ny ran’i Kristy izay nitondrana antsika niala tamin’ny fahatesana ho amin’ny fiainana. Zavatra lehibe tokoa ny nanalana antsika tamin’ny lolompo ho amin’ny fahadiovam-po, sy ny nanalana antsika tamin’ny faharatsiana ho amin’ny fahamarinana, ka tsy mba zavatra mora simba tahaka ny volamena na
volafotsy no nanadiovana antsika fa ny ran’i Kristy! Aoka isika hahatsiaro ny hasarobidin’ny nanavotana antsika, satria ny ran’i Kristy mihitsy nahazoantsika izany fanavotana izany.
Mba ho vongana vaovao tokoa anie isika!
Publié parfilazantsaramada avril 2, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorized